छुट्टीमा आएका मनोज जो बिहानै उठेर दुबई जाने तयारीमा थिए तर राति आएको पहिरोले पुरेर मृ त्यु भयो ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/छुट्टीमा आएका मनोज जो बिहानै उठेर दुबई जाने तयारीमा थिए तर राति आएको पहिरोले पुरेर मृ त्यु भयो !
बेपत्ता भएकाको सोमबार बिहानदेखि खोजी तीव्र पारिए पनि उनीहरुलाई फेला पार्न नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी उपरीक्षक पौडेलका अनुसार आज पनि बिहानदेखि बेपत्ताको खोजी जारी राखिएको छ । बेपत्ताको खोजीका लागि नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयवासी परिचालित छन् । “आज पनि बिहानदेखि स्काभेटर प्रयोग गरी पहिराले पुरिएकाको खोजी कार्य भइरहेको छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।पहिराले पुरिएका माझफाँटका ४० वर्षीय कमला थापा, २४ वर्षीय मनोज थापा र २१ वर्षीया अन्जना थापाको शव सोमबार नै फेला परेको थियो । उनीहरु एकै परिवारका हुन् । बेपत्ता रहेका राजेश पनि सोही परिवारका हुन् ।
व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटमा पनि पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका तीन जनाको निधन भएको छ । स्थानीय केशरबहादुर थापाको घर पहिरोले पुरिँदा उहाँकी श्रीमती ४० वर्षीया कमला, छोराहरु २४ वर्षीय मनोज र छोरी २१ वर्षीया अन्जनाको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोले पुरिएर घाइते केशरबहादुरलाई भने उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । केशरबहादुरका २० वर्षीय राजेश भने अझै बेपत्ता छन् ।पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका मनोज वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारी गर्दै थिए तर उनको विदेश जाने सपना पहिरोमै बिलाएको छ । मनोज वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जान काठमाडौँ यात्राको तयारी गर्दै थिए । रातिबाटै परेको पानी घरभित्र पसेपछि केशरबहादुर पानी बाहिर फाल्दै थिए । अचानक घर पुरिँदा केशरबहादुर भाग्न सफल भए तर घरभित्रका सबै जनाको पहिरोले पुरिएर निधन भयो ।
आतिनु पर्दैन ओ’मिक्रोनका कारण अहिलेसम्म कसैको ज्यान गएको छैनः डब्ल्यूएचओ